Haysashada Macaamiisha: Tirakoobka, Istaraatiijiyadaha, iyo Xisaabinta (CRR vs DRR) | Martech Zone
Haysashada Macaamiisha: Tirakoobka, Istaraatiijiyadaha, iyo Xisaabinta (CRR vs DRR)
Waxaan wadaagnaa wax yar oo ku saabsan soo iibsiga laakiin kuma filna haynta macaamiisha. Istaraatijiyadaha suuq-geynta weyn uma sahlana sida wadista wadista marba marka ka sii dambeysa, sidoo kale waxay ku saabsan tahay wadista hoggaanka saxda ah Haysashada macaamiisha had iyo jeer waa qayb yar oo ka mid ah kharashka soo iibsashada kuwa cusub.
Markii uu faafay, shirkaduhu way foorarsadeen umana ayan xanaaq badnayn sidii ay u heli lahaayeen badeecooyin iyo adeegyo cusub. Intaa waxaa sii dheer, shirarka iibka-shaqsiyeed iyo shirarka suuq-geynta ayaa si weyn u carqaladeeyay xeeladaha wax-iibsiga ee shirkadaha badankood. Intii aan u jeesanay shirarka dalxiiska iyo dhacdooyinka, awoodaha shirkado badan oo ay ku wadi karaan iibinta cusub ayaa la qaboojiyay. Tan macnaheedu waxa weeye xoojinta xiriirka ama xitaa kor u qaadista macaamiisha hadda jirta waxay muhiim u ahayd in dakhliyada la sii wado shirkaddooduna kor u kacdo.
Hoggaanka ururada koritaanka sare waxaa lagu qasbay inay fiiro gaar ah u yeeshaan sii-haynta macaamiisha haddii fursadaha wax-soo-qabashada ay yaraadeen. Waxaan ka labalabeyn lahaa in aan iraahdo taasi waxay ahayd war wanaagsan… waxay casharro xanuun leh u noqotay ururo badan oo ay ahayd inay xeebta kor u qaadaan oo ay xoojiyaan istiraatiijiyadooda sii haynta macaamiishooda.
Waxaa jira kharashyo badan oo aan muuqan oo la socda macaamil xumo. Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada istaaga ee waa inay kordhiyaan diiraddaada ku haynta macaamiisha:
67%% macaamiisha soo noqonaysa ayaa kharash badan galiya sanadkii saddexaad ee ay wax ka iibsanayaan meherad ka lixda bilood ee ugu horreysa.
Adoo ku kordhiya heerka sii-haynta macaamiisha 5%, shirkaduhu way awoodaan kordhinta macaashka by 25 ilaa 95%.
82% shirkadaha ayaa sidaas ku raacay kharashka haynta macmiilku wuu ka yaryahay soo iibsiga macaamiisha.
68% macaamiisha kuma laaban doonaan ganacsi markay haystaan ​​ka dib khibrad xun iyaga waxaa la jiray.
62% macaamiisha waxay dareemayaan astaamaha ay ugu daacadsan yihiin inaysan ku filneyn abaal mari daacadnimada macaamiisha.
62% macaamiisha Mareykanka ayaa u guuray nooc kale sanadkii la soo dhaafay a khibrad macmiil oo liidata.
Xisaabinta Qiimaha Haynta (Macaamiisha iyo Dollar)
Dhammaan macaamiisha ma wada qaataan isla lacagtaas shirkaddaada, sidaas darteed waxaa jira laba qaab oo loo xisaabiyo heerarka haynta:
Heerka Macaamiisha (CRR) - Boqolleyda macaamiisha aad heysato marka loo eego nambarka aad laheyd bilowga mudada (ma tirinayso macaamiisha cusub).
Heerka Qaadashada Dollar (DRR) - Boqolleyda dakhliga aad heysato marka loo eego dakhliga ku soo galay bilowgii muddada (oo aan la tirin dakhliga cusub). Hab loo xisaabiyo tan ayaa ah in macaamiishaada loo kala qaybiyo dakhliga kala duwan, ka dibna loo xisaabiyo CRR nooc kasta.
Shirkado badan oo faa'iido badan leh ayaa runtii yeelan kara haynta macaamiisha oo hooseysa laakiin haynta dollarka sare maadaama ay ka wareegayaan qandaraasyo yar yar oo ay u wareegayaan qandaraasyo waaweyn. Guud ahaan, shirkaddu waa caafimaad iyo faa'iido badan inkasta oo lumisay macaamiil badan oo yaryar.
Hagaha Ugu Dambeeya ee Haysashada Macaamiisha
Infograafigani ka yimid M2 Sugid Faahfaahin ka bixiyaa tirakoobka haynta macaamiisha, sababta shirkaduhu u lumiyaan macaamiisha, sida loo xisaabiyo heerka sii-haynta macaamiisha (CRR), sida loo xisaabiyo heerka haynta dollarka (DRR), iyo sidoo kale faahfaahinta siyaabaha loo hayo macaamiishaada:
Saameyn - Ka yaabiso macaamiisha bixinno lama filaan ah ama xitaa qoraal gacanta lagu qoray.
Filashooyinka - macaamiisha niyad jabsan badanaa waxay ka yimaadaan dejinta rajooyin aan macquul ahayn.
qanacsanaanta - kormeer tilmaamayaasha waxqabadka muhiimka ah ee bixiya aragti ku saabsan sida ay macaamiishaadu ugu qanacsan yihiin.
Jawaab-celinta - weydii jawaab celin ku saabsan sida waayo-aragnimadaada macmiil loogu horumarin karo loona hirgeliyo xallinta kuwa leh saameynta ugu weyn.
La xiriir - si joogto ah ula socodsiiso hagaajintaada iyo qiimaha aad u keento macaamiishaada waqti ka dib.
Macaamiisha kaliya ee qanciya kuma filna inay kasbadaan daacadnimadooda. Taabadalkeed, waa inay la kulmaan adeeg aan caadi ahayn oo uqalma ganacsigooda kucelcelinta iyo gudbinta. Fahmaan waxyaabaha kiciya kacdoonkan macaamil.
Rick Tate, Qoraaga Adeegga Pro: Abuuritaanka Better, Degdeg, iyo Macaamiil Kala Duwan
Shaacinta: Waxaan u isticmaalayaa xiriiriyaha ku xiran Amazon ee buugga Rick Tate.
Tags: crrkhibrada macmiilkadaacadnimada macaamiishahaynta macaamiishaheerka haynta macaamiishaku qanacsanaanta macaamilkaAdeegga macaamiishaheerka haynta dollardrm2 hakadhayntahelitaanka baraha bulshadaMaxay Macaamiisha U Baxaan
Telefoonka Gawaarida: Waxkasta oo Aad Ugu Baahan Tahay Inaad Ku Hirgaliso Raadinta Wicitaanka Iyadoo Falanqayntaada
Agoosto 29, 2013 saacaddu markay ahayd 12:52 PM
Aynu ku dhegno
Agoosto 29, 2013 saacaddu markay ahayd 10:56 PM
Um Cajiib. 🙂
is diiwaangelinta bulshada
Nov 5, 2013 at 3: 31 AM
Kala carar! Isdhexgalka macaamilku wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa macaamilka macaamilka ganacsiga.